အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးလိုပါသလား။ (၂) | ABC Radio Australia
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးလိုပါသလား။ (၂)
Lesson3of 14ပြောင်းရန်
အေဘီစီရဲ့ ​Learn ​Egnlish ​Facebook ​ကနေ ​တဆင့်မေးလာတဲ့ ​မွေးခွန်းတွေကို ​ပြန်လည်
ဖြေကြား ​ပေးလိုက်ပါတယ်။ ​မေးခွန်းတချို့ကတော့ ​sport ​နဲ့ ​games ​မှာ ​အဓိပ္ပာယ်ကွာခြားမှုရှိလား။ ​ဂိမ်းဆော့နေတယ်ဆိုရင် ​sport ​(အားကစား) ​ကစားနေတယ်လို့လည်း ​ပြောလို့ရလား ​ဆိုတာမျိုးတွေ ​မေးလာပါတယ်။
German ​Allain ​ဆိုတဲ့လူကတော့ ​အခုလို ​မေးထားပါတယ်။ ​
'The ​live ​sheep ​trade ​is ​a ​big ​industry' ​but ​why ​can't ​we ​say: ​the ​living ​sheep ​trade ​is ​a ​big ​industry. ​Is ​there ​any ​difference?
သိုးအရှင်တွေကို ​ကုန်ကူးတဲ့လုပ်ငန်းက ​ကြီးမားတယ်ဆိုတာ ​သိရပါတယ် ​ဒါပေမဲ့ ​'The ​live ​sheep ​trade ​is ​a ​big ​industry' ​လို့သာပြောပြီး ​ဘာဖြစ်လို့ ​'The ​living ​sheep ​trade ​is ​a ​big ​industry' ​လို့ ​ပြောလို့မရသလဲ ​လို့ ​မေးလာပါတယ်။
'Living' ​ဆိုတာကတော့ ​adjective ​ဖြစ်ပြီး ​'အသက်ရှင်ခြင်း၊ ​မသေခြင်း' ​လို့ ​အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ​ဒါပေမဲ့ ​'live' ​လို ​လူသုံးမများပါဘူး။ ​'live' ​ကိုတော့ ​နာမ်တွေရဲ့ ​ရှေ့မှာ ​အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
ဥပမာ ​'ကြွက်ရှင်တစ်ကောင်' ​လို့ ​ပြောချင်ရင် ​(a ​live ​mouse) ​လို့ ​ပြောနိုင်ပြီး ​နာမ်ရဲ့ ​အနောက်မှာ ​ထည့်ပြောရင်တော့ ​'alive' ​ကို ​သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ​'ကြွက်က ​အသက်ရှင်သေးတယ်'လို့ ​ပြောချင်ရင် ​'the ​mouse ​is ​alive.' ​လို့ ​ပြောရမှာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
'living ​sheep ​industry' ​ကို ​အသုံးမပြုရတာကတော့ ​အဲဒီအသုံးအနှုန်းကို ​သုံးလေ့သုံးထမရှိတဲ့အတွက် ​ဖြစ်သလို ​'living ​sheep ​trade' ​လို့ပြောရင် ​'လက်ရှိ ​ရှိနေတဲ့ ​သိုးကုန်သွယ်ရေး' ​လို့ ​အဓိပ္ပာယ်ပေါက်နိုင်တဲ့အတွက် ​အဲဒီလို ​မသုံးပဲ ​'သိုးအရှင်ကုန်ကူးရေးလုပ်ငန်း' ​လို့ ​ပြောတဲ့အခါ ​'live ​sheep ​trade' ​ဆိုတဲ့ ​အသုံးအနှုန်းကို ​သုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ​
Naresh ​Kumar ​ကလည်း ​အခုလို ​မေးထားပါတယ်။
What ​does ​the ​term ​'ante' ​mean?
'Ante' ​ရဲ့ ​အဓိပ္ပာယ်ကို ​သိချင်တယ်လို့ ​မေးလာပါတယ်။
'Ante' ​ဆိုတာ ​ဖဲချပ်လောင်းကစားလုပ်တဲ့အခါမှာ ​အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ ​စကားလုံးပါ။
ဖဲကစားတဲ့လူတွေကို ​ဒိုင်ကနေ ​ဖဲချပ်မဝေခင်မှာ ​ကစားမယ့်လူတွေက ​ကြိုတင်လောင်းထားတဲ့ ​ငွေကြေးပမာဏကို ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
လောင်းကစားလောကမဟုတ်ပဲ ​တခြားနေရာမှာ ​'up ​the ​ante' ​လို့ပြောရင် ​ငွေကြေး ​ထပ်တိုးဖို့ ​ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ​'He's ​going ​to ​up ​the ​ante ​in ​the ​negotiation ​by ​asking ​for ​more ​money.' ​လို့ပြောရင် ​'ဒီဆွေးနွေးမှုအတွင်း ​ငွေကြေးတွေ ​ထပ်ပေးဖို့ ​သူက ​တောင်းဆိုဖို့ ​စီစဉ်နေတယ်' ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
Bhe ​Nepomuceno ​ကတော့ ​အခုလို ​မေးထားပါတယ်။ ​
What ​does ​the ​phrase ​'sour ​grapes' ​mean?
'sour ​grapes' ​ဆိုတဲ့ ​စကားစုရဲ့ ​အဓိပ္ပာယ်ကို ​ရှင်းပြဖို့ ​မေးလာပါတယ်။
'sour ​grapes' ​ရဲ့ ​တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ် ​ကတော့ ​'စပျစ်သီးချဉ်' ​လို့အဓိပ္ပာယ်ရပေမယ့် ​တကယ့်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ​တခုခုကို ​လိုချင်လို့ ​မရတဲ့အခါ ​အဲဒီအရာက ​မကောင်းပါဘူးလို့ ​ပြောလိုက်တဲ့အခါမျိုးကို ​ဆိုလိုတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစကားပုံကတော့ ​'မစားရတဲ့အမဲ ​သဲနဲ့ပက်' ​ပဲ ​ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ​'She ​didn't ​get ​the ​TV ​job ​and ​now ​she's ​saying ​she ​thinks ​TV ​is ​trivial.' ​လို့ပြောရင် ​'ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ​အလုပ်ရဖို့သူကြိုးစားတာ ​မအောင်မြင်တဲ့အခါကြတော့ ​ရုပ်မြင်သံကြားအလုပ်က ​အရေးမပါ ​ပါဘူးလို့ ​သူပြောင်းပြောနေတယ်' ​လို့ ​အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
'sour ​grapes' ​ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းက ​အီဆွတ် ​(Aesop) ​ပုံပြင်ကနေ ​လာတာပါ။ ​ငယ်ငယ်တုန်းက ​ဖတ်ဖူး ​ကြားဖူးကြမှာပါ။ ​မြေခွေးတစ်ကောင်က ​အမြင့်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ​စပျစ်သီးကို ​စားဖို့ကြိုးစားတာ ​မအောင်မြင်တော့ ​အလကားပါ ​ဒီစပျစ်သီး ​မချိုပါဘူး ​ဒါကြောင့် ​စားချင်စိတ်လည်း ​မရှိတော့ပါဘူးလို့ ​ပြောလိုက်တဲ့ ​ပုံပြင်ကနေ ​လာတဲ့ ​စကားစု ​ဖြစ်ပါတယ်။
Aina ​Lucia ​ကလည်း ​အခုလို ​မေးလာပါတယ်။ ​
What's ​the ​difference ​between ​sport ​and ​games?
sport ​နဲ့ ​games ​တို့ရဲ့ ​ကွာခြားမှုကို ​ရှင်းပြပေးဖို့ ​ပြောလာတာပါ။
မြန်မာဘာသာမှာတော့ ​sport ​နဲ့ ​ဂိမ်းတို့ရဲ့ ​အဓိပ္ပာယ်က ​ခြားနားပါတယ်။ ​ဒါပေမဲ့ ​အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ ​sport ​(အားကစား) ​ကိုလည်း ​တခါတရံ ​game ​(ဂိမ်း) ​လို့ ​ပြောဆိုတာမျိုးရှိတဲ့အတွက် ​မသဲကွဲကြတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ​a ​game ​of ​football ​ဆိုရင်တော့ ​ဘောလုံးဆိုတဲ့ ​ဂိမ်းကို ​ကစားတာက ​sport ​(အားကစား) ​ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ​scrabble ​ဆိုတဲ့ ​ဂိမ်းကို ​ကစားတဲ့အခါမှာတော့ ​sport ​ဆိုတဲ့ ​အားကစားကို ​မရနိုင်ပါဘူး။
sport ​ကတော့ ​ကိုယ်ခန္ဓာ ​လှုပ်ရှားမှုလိုအပ်ပါတယ်။ ​ဥပမာ ​ဘတ်စ်စကက်ဘော၊ ​ဘောလုံး၊ ​ဘော်လီဘော၊ ​တင်းနစ် ​နဲ့ ​ဂေါက် ​ဂိမ်းတွေကို ​sport ​(အားကစား)လို့ ​သတ်မှတ်နိုင်ပေမယ့် ​ထိုင်ပြီးကစားရတဲ့ ​အပျင်းပြေ ​ဂိမ်းတွေကိုတော့ ​sport ​လို့ ​မခေါ်နိုင်ပါဘူး။ ​ဥပမာ- ​ကျားရွှေ့တာ၊ ​scrabble ​ကစားတာတွေက ​ဂိမ်းဆော့တာဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ​sport ​တော့ ​မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။